Forum serasera malagasy VAOVAO MA-TV 16 FEVRIER 2012 - Dinika forum.serasera.org
VAOVAO MA-TV 16 FEVRIER 2012
Fitohizan'ny hafatra : VAOVAO MA-TV 16 FEVRIER 2012
rijadolly - 17/02/2012 18:04
Notanterahana androany ny fihaonana teo amin'ny mpitsara sy ny polisim-pirenena izay teo ambany fanelanelanan'ny filohan'ny tetezamita sy ny praiminisitra.
Taorian'izay fihaonana izay dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina.
Nihaona tamin'ny mpanao gazety androany, tetsy amin'ny ministeran'ny Atitany Anosy, ny ministry ny Atitany Florent Rakotoarisoa
Naneho hevitra manoloana ny faneken'ny FFKM handray andraikitra manoloana ny krizy amin'izao fotoana izao ny Pr Alain Tehindrazanarivelo.
Naneho hevitra manoloana ny mety fandraisan'andraikitry ny FFKM amin'ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny sori-dalana pastera Nestor Razafindramanitra avy ao amin'ny Finona.
Betsaka ny zavatra manjavozavo mikasika ny fananganana ny Voaramiera Mahaleotena mikasika ny Fididianana, raha ny voalazan'ny fiaraha-monim-pirenenena mivondrona ao amin'ny Alliance des Organisations de la Société Civile.
Nanapa-kevitra ny hivoaka amin'ny fahanginany ireo vahoaka monina any amin'ny toerana iva. Tamin'izany no nanambaran'izy ireo fa tokony hatolotra ny miaramila ny fitondrana raha toa ka tsy hifanaraka ireo mpanao politika.
Raha tokony rahampitso zoma 17 febroary no hanatanterahana ny fifidianana izay solotenan'ny mpanao gazety ao anatin'ny CENI, dia tsy tanteraka izany
Tsy mitsaha-mitombo ireo tarehimarika mifandraika amin'ny fahavoazana nateraky ny rivodoza Giovanna raha ny tatitra vonjimaika navoakan'ny BNGRC androany tolakandro.
Fantatra fa anisan'ny tena nitondra faisana ny teny amin'ny kaominina Ambohimanga rova, ary betsaka ny zavatra simba tao amin'ny rovan'Ambohimanga.
Amin'ny faran'ity volana febroary ity no fantatra fa hamerenana indray ireo haino aman-jery naato noho ny antony maro.
Mahatratra an-jatony isan'andro ny anton-taratasy fangatahana fidirana ho mpampianatra mpiasam-panjakana tonga eny anivon'ny minsiteran'ny Fanabeazam-pirenena.
Nihaona tamin'ireo solotenan'ny sehatra tsy miankina izay manana anjara toerana eo amin'ny fampandrosoana androany ny praiministra lefitra misahana ny toekarena sy ny indostria, Botozaza Pierrot.
Ho fanomezana sehatra ny fizahan-tany sy ho fampafantarana an'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia hotanterahana ny 31 mey ka hatramin'ny 02 jona ho avy ny Salon international du tourisme.
Manoloana ny voina mitranga eto amin'ny firenena taorian'ny fandaloban'ilay rivo-doza Giovanna, dia nampiseho ny firaisan-kinany amin'ny olom-pirenena malagasy ny Vondron'olontsotra Madagasikara.
Anisan'ny tafiditra ao anaty ny laharam-pamehan'ny Lions Club Analamanga ny fitsinjovana ny reny sy ny zaza. Androany dia nisy ny fizarana fitaovana sy fanafody teny amin'ny hopitaly sy tobim-pahasalamana miisa dimy teto an-drenivohitra.
Zanan-kazo 1.000 no novolen'ny fianakaviamben'ny ministeran'ny Harena an-kibon'ny tany io maraina io, tao amin'ny fokontany Ambohitrantenaina kaominina Imerintsiatosika.
Ambony ny moraly ho an'ny ekipan'ny Tana Formation hiatrika ny dingana voalohany amin'ny amboaran'ny kaonfederasiona any Gaborone, Botswana.
Hivoaka manomboka rahampitso ny laharana faha-348 amin'ny gazety Mahery izay hitondrana lohahevitra mahaliana maro samihafa.
Page rendered in 22.0027 seconds